Thwebula Free MP3 futhi WMA Converter 2.2 – Vessoft
Free MP3 futhi WMA Converter
Thwebula Free MP3 futhi WMA Converter
MP3 ezamahala & WMA Converter – a isofthiwe ukuguqula amafayela alalelwayo kuya amafomethi ehlukahlukene. Isofthiwe isekela ezifana takhiwo ezithandwayo njengoba MP3, FLAC, WAV, Ogg, uhlobo lwenkawu, MPC. MP3 ezamahala & WMA Converter iqukethe ehlukahlukene amathuluzi ikwazi umsebenzisi ukuze uhlele izilungiselelo ukuguqula amafayela alalelwayo. With umhleli eyakhelwe-in of tags, isofthiwe ikuvumela ukuba wengeze izixhumanisi amafayela bese ukushintsha isikhumba, isihloko noma uhlobo of amathrekhi zomsindo. Futhi MP3 Free & WMA ikuvumela ukukopisha futhi asindise umculo kukhompyutha yakho kusukela CD.
Ukusekela amafomethi zomsindo ethandwa
Yenza ngokwezifiso izilungiselelo okukhipha
Eyakhelwe-in tag umhleli
Kopisha audio kusuka CD
Amazwana on Free MP3 futhi WMA Converter:
Free MP3 futhi WMA Converter Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... AnyTrans 5.5
Mozilla Firefox 51.0.1 futhi 52.0b8 rc 1